I-FontSpark yiwebhusayithi ukufumana inkuthazo kwiifonti zeeprojekthi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-FontSpark ikuvumela ukuba ufumane ifonti efanelekileyo oyikhangelayo kwiprojekthi yakho
UManuel Ramirez | | Imithombo, Ukuphefumlelwa
Khangela umthombo ozichazayo, icace gca kwaye yahlulahlulwe kwezinye, kuhlala kungekho lula. Oko kukuthi, zininzi iifonti esaziyo sonke ukuba zisebenziseka ngokuchanekileyo ukubeka loo nqanaba, kodwa kwabo bafuna ukugqibelela bahlala bekhangela enye into.
I-FontSpark yiwebhusayithi eza kusinceda ukuze sikwazi ukufumana owona mthombo weprojekthi ethile. Ayisiyo kuphela kwesixhobo kuthungelwano lwenethiwekhi, kodwa sesinye esinokusisebenzisa xa kufuneka siqalele umthengi umsebenzi omtsha.
Into ehlekisayo malunga neFontSpark yindlela esenza ngayo jonga ukuba yeyiphi ifonti efanelekileyo yale projekthi intsha. Oko kukuthi, kuyakusicela kuphela ixesha elithile kunye neempawu esizifunayo kulo mthombo ufunwayo.
Kwaye iyenza yonke into ngendlela yokunxibelelana kwaye inike amava omsebenzisi amahle. Singena kwiFontSpark kunye Kufuneka sichwetheze nje into. Kule meko, naliphi na igama ukuqala ukwenza zonke iintlobo zoovimba esinokuphefumlelwa.
Kodwa sinokuqhubeka ngokunqakraza kuseto lwe icon. Apho sinokukhetha zombini uhlobo lwefonti kunye nobunzima bayo. Ke siza kukunika imikhondo engakumbi yento esiyifunayo ukuze uqalise ukusinika ezo zimvo zigqibeleleyo ukuze uzise kamva kwiiblogi, kwi-ecommerce nakumakhasi okufika kwabaxhasi.
Ikwasivumela yiya ngqo kumthombo Ukusuka kwiqhosha elibonisiweyo loku kwinxalenye esezantsi nasekunene kojoliso oluphambili losetyenziso lwewebhu yeFontSpark; Ewe, iyaphela ngo .app kwaye yile nto uGoogle asungule ezi ntlobo zemimandla: iiapps zewebhu.
I-FontSpark iba sisixhobo ukusoloko unakho ukuphefumlelwa, ke sele ithatha ixesha ukuyigcina kwiintandokazi; ungaphoswa ziifonti ezivela kwiifonti zikaGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » I-FontSpark ikuvumela ukuba ufumane ifonti efanelekileyo oyikhangelayo kwiprojekthi yakho
Uyisusa njani imvelaphi kuwo nawuphi na umfanekiso kwimizuzwana emi-5 kwaye ngaphandle komzamo
Izimvo zokunika ubugcisa ngeKrisimesi